METFP – FARITRA MATSIATRA AMBONY : Fitsidihana ny LTP Ambalavao – METFP
METFP – FARITRA MATSIATRA AMBONY : Fitsidihana ny LTP Ambalavao
➡️Ambalavao no namaranana ny fitsidiham-paritra notanterahan-dRamatoa Ministra VAVITSARA Rahantanirina Gabriella sy ireo mpanara-dia azy, ny Alakamisy faha 28 Aprily.
Avy hatrany dia nitsidika ny Lisea tekinika tao an-toerana ny delegasiona notronon’ireo manam-pahefana, ary nanolotra fitaovana vitsivitsy hanaovan’ireo mpianatra andrana mandritra ny fiofanana. Anisany notsidihina tamin’izany ny « atelier » fizàrana asa. Ka hita fa mbola misy fitaovana tsy ampy ao, ahafahan’ireo mpianatra manao andrana.
✅Nanambara ireo olom-boafidy tao an-toerana, anisany izany ny Solombavam-bahoaka sy ny Ben’ny tanana, fa vonona ny hifanome tanana, na ara-tekinika izany na ara-pitaovana. Nanagataka ihany koa izy mba hanitarana ireo lalam-piofanana ao an-toerana, indrindra ny sehatry ny fizahantany.
⏩Marihina fa isany sangany amin’ny fahaizana ny mpianatra ao amin’ny lisea teknika Ambalavao, raha eto amin’ny Faritra Matsiatra Ambony. Isany tena manana traikefa tokoa izy ireo, satria dia izy ireo ihany no nanamboatra ny tambohon’ny EPP Alatsinainy.
📌Nandritra ny dinika dia nanambara i Ramatoa Ministra fa vonona hitady famatsiam-bola ahafahana mameno ireo fitaovana tsy ampy. Nambarany ihany koa fa ho jerena akaiky ny fanitarana lalam-piofanana izay mifandraika amin’ny fampiroboroboana ny tanana, dia ny fikirakirana ny landy sy ny sehatry ny fizahantany , ary indrindra hisitrahan’ny tanora asa mendrika.
©️CABINET METFP/ Aprily 2022